Ọkụ na ọdụ ụgbọ oloko Jeddah - RayHaber
[21 / 10 / 2019] IMM na - ewepụ ihe ndị dị egwu na ụgbọ ala kwụsịrị	34 Istanbul
HomeỤWAAsia966 Saudi ArabiaỌkụ na ọdụ ụgbọ oloko Jeddah
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 966 Saudi Arabia, Asia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, VIDEO 0
Ọkụ n'ọdụ ụgbọ oloko
Ọkụ gbara na ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Jeddah, Saudi Arabia.
Ọkụ gbara na ọdụ ụgbọ elu Haramain dị na Jeddah, Saudi Arabia. Nkwupụta nke ndị ọrụ nchekwa obodo kwuru na mmadụ ise ahụ merụrụ ahụ mana egbughi ya na ọkụ ahụ.
A na-ahụ vidio mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ọdụ ụgbọ oloko Jeddah Haramain, anwụrụ ọkụ ojii na helikọpta ndị na-efegharị n’elu ụlọ nke ebe ahụ. Vidio a gosipụtara na ntanetị gosipụtara na ihe ruru mmadụ iri na abụọ n’elu ụlọ nke ụlọ ahụ.
E mepere ụzọ ụgbọ oloko dị elu nke Haramain, nke na-efu EUR 6,7 (ijeri 7,3), na Septemba. Usoro maka ndị Alakụba bụ ijikọ obodo dị nsọ nke Mak na Medina na obodo Jeddah site na ụgbọ oloko eletrik na-eme njem na 2018 kilomita kwa elekere (300 kilomita kwa elekere), na ikike kwa afọ nke ndị njem nde 186.
Ọkụ gbara ọkụ n’elu ụlọ elu ụgbọ elu Al-Haramain #Jeddah, #SaudiArabia
Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na-arụ ọrụ zuru oke iji nagide ọnọdụ ahụ.
Enweghị mmerụ ahụ kọrọ. https://t.co/jbbwvQLomk
Ụgbọ okporo ígwè Yolcati 09 / 06 / 2017 Uzo okporo ụzọ Yolçatı Korkutan Fire: Elazığ -Malatya n'okporo ụzọ na okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị na Railway Yolçatı. Dika ozi enyere na June 6 oku na ulo nke ulo oru ulo oru maka ihe n'emeghi ya. Ọkụ ọkụ na ụlọ ụlọ nkwakọba ihe n'oge na-adịghị anya toro ma gbasaa na mkpọchi nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ. Ndị ọrụ TCDD site na bọmbụ ọkụ si Yolcati n'ọdụ ụlọ ọrụ ahụ ozugbo ọkụ nwere ike imenyụ ọkụ. N'ọnọdụ nke ọkụ nke gburu ma ọ bụ merụọ mgbe a na-eme nnyocha ahụ. Isi: www.elazigsonhaber.com
Fire at Cairo's Ramses Main Train Station ... Dịkarịa ala 25 Nwụrụ Anwụ! 27 / 02 / 2019 Ụgbọ okporo ígwè na ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị na Ramses dị n'isi obodo Egypt, Cairo, nabatara na ngwugwu mechiri emepe ka ọ na-akpali ngwa ngwa. Mgbe okuku ahụ dakwasịrị, ọ dịkarịa ala, ndị mmadụ gburu 25 na ndị mmadụ gburu 50. Dika ihe ndi ozo si kwuo, e gburu mmadu 25 na ndi mmadu 50 meruru aru n'ihi oku na igbawa. Ndị isi nke ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ na ndị merụrụ ahụ erubeghị. A na-emechi ụgbọ okporo ígwè Ramses mgbe ọ na-eduzi ndị nche na ndị ọkụ ọkụ n'ógbè ahụ. A na ekwu na ndị mmadụ na-enwe nsị carbon monoxide n'ihi na ha apụghị ịhapụ ọdụ ahụ. Isi ihe nchebe na-ekwu na ọ dịghị ihe gosiri na ihe mberede ahụ bu n'uche, ebe Minista Ụgbọ njem kwuru na ụlọnga
Jeddah jikọọ na mpaghara ndị ọzọ na ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ 27 / 10 / 2014 Jeddah ga - ejikọta na mpaghara ndị ọzọ na ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ: A na - akọ na a kwadoro okporo ígwè okporo ígwè 660 ogologo ọdụ ụgbọ okporo ígwè jikọtara Jeddah obodo Jeddah na mpaghara Jazan. Ihe oru ngo a, nke ndi Saudi Railway Organisation ga-aru, ana acho anya ime ka mmekorita aku na uba, mmekorita na mmekorita ndi ozo n'etiti obodo abuo. Dị ka akụkọ mgbasa akụkọ mpaghara si kwuo, e debere engine engineering maka ọmụmụ ihe. Ndị isi, ụgwọ ọrụ ahụ, ikike ndị njem na ibu ibu ka a ga-enweta ozi a pụrụ ịdabere na ya, o kwuru. Ema ama ọfiọk ke akpa ama ọtọn̄ọ ndikpepn̄kpọ emi. Ọhụrụ ụgbọ okporo ígwè ga-aga n'ihu n'ọdụ ụgbọ mmiri mba ụwa ma banye Obodo Ọchịchị Mmebi iwu
Jidde-Mecca-Medina agba ọsọ ọsọ ụgbọ okporo ígwè malitere 27 / 01 / 2017 Jidde-Medina na-agba ọsọ ụgbọ oloko dị elu malitere: Jeddah - Mecca - Medina nnukwu ụgbọ oloko oru ngo malitere amalite nke ule malitere 2013'de. Ụgbọ okporo ígwè ahụ, nke nwere ike ịnweta 330 kilomita kwa awa, ga-eji belata okporo ụzọ karịsịa n'oge oge njem. Na 2013, onyeisi nke Òtù Na-ahụ Maka Ụgbọ okporo ígwè Saudi. 4 nke Cuba mara ọkwa oru ngo ụgbọ oloko Jeddah-Mecca-Medina, nke ga-akwusi otu afọ ma na-eri dollar dolla 8. A na-enyefe ọrụ ụgbọ okporo ígwè Harameyn na-agba ọsọ ọsọ gaa na consortium Saudi-Spanish Al-Shalya mgbe obi dị nro. Jeddah - Mecca - Medina n'etiti ndị njem 160 puku, nke ga-ebu usoro ụgbọ okporo ígwè dị elu na 450 km
Ụlọ Ọrụ Ime Ihe Ike Aka Jeddah High Speed ​​Station 18 / 06 / 2019 Ụlọ ọrụ Hiera, bụ otu n'ime ụzọ ntinye ụgbọ okporo ígwè kachasị mkpa nke Ọchịchị nke Saudi Arabia, mere atụmatụ iji jee ozi ala Islam site na ime njem nke ndị njem ala, ndị ọbịa Umrah na ụmụ amaala Saudi. Ọ bụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè dị elu nke na - ejikọta obodo abụọ dị nsọ nke Mecca na Medina na eriri okporo ígwè okporo ígwè 450 ma gụnyere ụgbọ (Mecca, Jeddah, KAEC, Medina). Yapı Merkezi weere ụlọ nke Medina Station n'ime usoro Haramin High Speed ​​Train Project ma wuchaa nke ọma na ngwa ngwa n'ime ọdụ anọ. N'ihi ihe ndị ọ rụzuru na Medina Station, Yapı Merkezi agwụla işler
Konya Tram Map, Oge Konya Tram, Aha ọdụ na Pricetọ oge ọnụahịa
Ụgbọ okporo ígwè Yolcati
Fire at Cairo's Ramses Main Train Station ... Dịkarịa ala 25 Nwụrụ Anwụ!
Jeddah jikọọ na mpaghara ndị ọzọ na ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ
Jidde-Mecca-Medina agba ọsọ ọsọ ụgbọ okporo ígwè malitere
Ụlọ Ọrụ Ime Ihe Ike Aka Jeddah High Speed ​​Station
Nkwupụta Obi Ọjọọ: A ga-arụ ọrụ mkpuchi ọkụ na ịdọ aka ná ntị maka nchekwa ọkụ
Ntụle na-atụ egwu: Ịmepụta nchọpụta ọkụ na ọkụ ọkụ (na Sirkeci Marmaray Loko Maintenance Workshop Directorate)
2014 - Nzukọ Nchebe Ọkụ Na-enwu Ọkụ
Nkwupụta nke Obi ebere: ANKARAY Osisi mmeghari ohuru nke ụlọ ọkụ na ọkụ na-eji ọkụ na ụlọ
Ihe ngosi mgbasa ozi: Ịmepụta ụlọ ọkụ na ọkụ ọkụ n'aka ANKARAY
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (381) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)